﻿NUUF BAHI YAA BIIFTUU! – Welcome to bilisummaa
﻿NUUF BAHI YAA BIIFTUU!
bilisummaa September 30, 2015	Leave a comment
Yaa biiftuu yaa ifa ummataa
Dukkana maaf tahe
Bakkayyuu wal gahee
Nutti maaltu tahee?
Ifnikee garayyuu hangayaa
Hundaahuu wal gayaa
Biiftuu… ormaaf baatee
Nurraa maaliif turtee?
Maaliif nu calliftee….
Dukkanatti nu dhiifte?
Ifa arguu feenee…..
Maal sitti yakkine?
Ifakee arguuf bara meeqa eeynee
Dukkana cillimiin eergarama mudannee
Gahe nuun jettee biiftuu maa hinbaane?
Yaa hangaatuu, yaa iftuu,sin baana yaa biiftuu
Yaa faaya uumamaa tan hunda mul’iftu,
Yaa tan ifa keetiin bobbaaftee galchitu,
Yaa tan uumaa Rabbii akkaan bareechitu,
Sabakoo Oromoof yoomuma kan baatu?
Rabbumaa siif kanne dandeettii atisii
Ifakee bareedaan mee nuuf walaqqisii
Wal arguu dadhabnee wal nu qunnamsiisii
Dharraa bara meeqaa dheebuu nu baasii
Addunyaa irratti nuuf bari’uukee labsii
Nuuf bahi yaa biiftuu golgolti nuuf geessii!
Previous WAA SADI AFOOLA OROMOO KEESSAA
Next Maatii H / Qeebaloo Sa’id irraa..
( Ogeessa irraa kan naaf ergame) A. Manni maree ministeerotaa har’a imaammata afaanii irratti marii’atee …